Kedu ihe bụ eluigwe na ala: njirimara, nhazi na okwu ọchịchịrị | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | 19/07/2021 10:15 | Astron
¿Kedu ihe bụ eluigwe na ala? Ọ bụ otu n’ime ajụjụ ndị ọkà mmụta sayensị jụrụ kemgbe ụwa. N'ezie, eluigwe na ala bụ ihe niile, na-enweghị ihe ọ bụla. Anyị nwere ike ịgụnye n’ime ihe niile dị n’eluigwe, ike, oghere na oge na ihe niile dị. Otú ọ dị, mgbe a na-ekwu okwu banyere ihe eluigwe na ala bụ, e zoro aka na mbara mbara ala Earthwa.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe ụwa bụ, njirimara ya na ụfọdụ nchepụta.
1 Kedu ihe bụ eluigwe na ala
2 Nhazi na mbibi
3 Mkpa nke ihe gbara ọchịchịrị
4 Antimatter na ọchịchịrị ike n’eluigwe na ala
Eluigwe na ụwa buru ibu, ma o nwere ike ọ gaghị enwe oke. Ọ bụrụ otu a, a ga-enwe ihe enweghi ngwụcha n’ime kpakpando enweghi ngwụcha, nke abụghị etu ahụ. N’aka ozo, dika odi n’ihe, obu uzo efu. Fọdụ ndị mmadụ na-ekwudị na eluigwe na ala anyị bi na ya adịghị adị, ọ bụ hologramụ.
Universewa a ma ama nwere ụyọkọ kpakpando, ụyọkọ ụyọkọ kpakpando, na ihe owuwu ibu a na-akpọ superclusters, nakwa dị ka ihe metụtara intergalactic. N'agbanyeghị na teknụzụ dị elu dị taa, anyị amaghị kpọmkwem oke ya. A naghị ekesa ihe n'otu, mana ọ na-etinye uche n'ebe ụfọdụ: galaxies, kpakpando, mbara ala, wdg. Agbanyeghị, 90% nke ịdị adị ka ewere bụrụ ihe gbara ọchịchịrị nke anyị enweghị ike ịhụ.
Eluigwe na ala nwere akụkụ anọ amaara ama: atọ dị na mbara (ogologo, ogologo, na obosara) na otu na oge. N'ihi ike ndọda kachasị, ọ na-arapara ọnụ ma na-agagharị na-aga n'ihu. Ourwa anyị pere ezigbo mpe ma e jiri ya tụnyere elu-igwe. Anyị bụ akụkụ nke sistemu nke anyanwụ, efuola n'aka Milky Way. Milky Way nwere 100.000 ijeri kpakpando, mana ọ bụ nanị otu n’ime narị ijeri ụyọkọ kpakpando ndị mejupụtara usoro mbara igwe.
Nhazi na mbibi
Nkwupụta Big Bang na-akọwa etu esi akpụ ya. Ozizi a gbasara ihe dịka ijeri afọ 13.700 gara aga, ihe nwere oke njupụta na ọnọdụ okpomọkụ. Enwere ntiwapụ na-eme ihe ike na njupụta na ọnọdụ okpomọkụ nke eluigwe na ala na-ebelata kemgbe ahụ.
The Big Bang bụ singularity, ewepu na enweghị ike ịkọwa site na iwu nke physics. Anyị nwere ike ịmata ihe mere site na mbido, mana enweghị nkọwa sayensị maka oge efu na nha efu. Ruo mgbe ekpughere ihe omimi a, ndị ọkà mmụta sayensị agaghị enwe ike ịkọwa nke ọma ihe eluigwe na ala bụ.
Ka ọ dị ugbu a, e nwere ọtụtụ echiche nke mgbe ịkọwachara kọwaa otu ha si eche na njedebe nke ụwa ga-adị. Na-amalite, anyị nwere ike ikwu banyere ihe nlereanya nke Nnukwu ifriizi, nke na-egosi na mgbasawanye nke eluigwe na ala ga-eme (n'ime otu ijeri afọ) ikpochapu kpakpando niile, na-akpata oyi na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị.
Anyị nwekwara ike banyere tiori nke Nnukwu adọka (ma ọ bụ akwa akwa) nke na-egosi na ka ụwa niile na-agbasawanye, a na-ewepụta ike ọchịchịrị, na-erute oge mgbe ike ọchịchịrị ga-emeri ike ndọda, na-emebi nguzozi dị n'etiti ikike abụọ ahụ na iwepụta ụdị ọ bụla. nke okwu.
Mkpa nke ihe gbara ọchịchịrị
Na astrophysics, a na-akpọ ihe ndị dị na mbara igwe na-abụghị ihe baryonic (ihe nkịtị), neutrinos, na ọchịchịrị ike ọchịchịrị. Aha ya sitere n'eziokwu na ọ naghị ewepụta radieshon electromagnetic ma ọ bụ soro radieshon electromagnetic mee ihe n'ụzọ ọ bụla, na-eme ka ọ ghara ịhụ ya anya na mbara igwe dum. Agbanyeghị, ekwesighi ịmegharị ya na antimatter.
Ihe gbara ọchịchịrị na-anọchite 25% nke mkpokọta nke eluigwe na ala, n'ihi mmetụta nke gravitation ya. E nwere ihe ịrịba ama siri ike nke ịdị adị, nke a na-achọpụta na ihe ndị na-agụ kpakpando nke gbara ya gburugburu. N’ezie, e bu ụzọ gosipụta ịdị adị ya na 1933, mgbe onye Switzerland na-enyocha mbara igwe na physics Fritz Zwicky kwuru na “ihe a na-adịghị ahụ anya” na-emetụta ọsọ nke ụyọkọ kpakpando. Kemgbe ahụ, ọtụtụ ihe ndị ọzọ achọpụtawo mgbe niile na ọ nwere ike ịdị.
Amachaghị banyere ihe gbara ọchịchịrị. Ihe mejuputara ya bu ihe omimi, ma otu ihe puru ime bu na o nwe nkpuru nkpuru ma obu ihe ndi ozo choro (dika WIMPs ma obu axons), ka ekpughere ha ole na ole. Azịza doro anya banyere ihe mejupụtara ya bụ otu n’ime ajụjụ ndị gbara ọkpụrụkpụ banyere cosmology nke oge a na physics.
Ọnụnọ nke ihe gbara ọchịchịrị dị mkpa ịghọta Big Bang nlereanya nke e guzobere eluigwe na ala na omume nke usoro ihe. Nchịkọta sayensị na-egosi na e nwere ọtụtụ ihe dị n'eluigwe na ala karịa ka a pụrụ ịhụ anya. Iji maa atụ, ụyọkọ kpakpando ndị e buru n’amụma na-agbanwekarị n’enweghị ihe kpatara ya, ọ gwụla ma e nwere ihe a na-apụghị ịhụ anya na-agbanwe ikike ndọda n’ihe a na-ahụ anya.
Antimatter na ọchịchịrị ike n’eluigwe na ala
Anyi aghaghi imeghari ihe gbara ochichiri na antimatter. Nke ikpeazụ bụ ụdị okwu nkịtị, dị ka okwu ahụ nke mejupụtara anyị, mana ọ na-agụnye ihe ndị elementrị nwere akara eletriki na-abụghị: ezigbo / adịghị mma.
Ihe mgbochi eletrọn bụ mkpụrụ nke antimatter, nke kwekọrọ na elektrọn, mana nwere ụgwọ dị mma karịa ụgwọ na-adịghị mma. Antimatter anaghị adị n'ụdị na-akwụsi ike n'ihi na ọ na-ekpochapụ okwu (nke dị oke karịa), yabụ na ọ naghị ahazi onwe ya n'ime atọm a na-ahụ anya na ụmụ irighiri ihe. Antimatter nwere ike na enwetara site urughuru ome osooso. Agbanyeghị, mmepụta ya dị mgbagwoju anya ma dịkwa oke ọnụ.
Ọchịchịrị bụ ụdị ike nke dị na mbara igwe niile ma na-eme ka mgbasawanye ya gbasaa site na iweghachi ike ndọda ma ọ bụ ike. A na-eme atụmatụ na 68% nke ihe dị ike na mbara igwe bụ nke ụdị a, ọ bụkwa ụdị ike dị iche iche nke na-adịghị eso mmekọrịta ọ bụla ọzọ dị mkpa na mbara igwe emekọrịta, ọ bụ ya mere eji akpọ ya "ọchịchịrị". Mana, n'ụkpụrụ, ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ọchịchịrị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere ihe ụwa bụ, mmalite ya na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Kedu ihe bụ eluigwe na ala